Monday December 24, 2018 - 18:40:43 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Super Admin
Ciidamadda Burundi ayaa Axaddii sheegay inay ka soo horjeedeen codsi ay soo saareen Midowga Afrika oo laga qaaday 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya bishii February 28-keedii.
Afhayeenka ciidamada Burundi Colonel Floribert Biyereke ayaa ku sheegay hadal ka soo yeeray in ciidamadu ay waydiisanayaan xukuumadda in ay ku doodaan in tiro askar ah oo ka mid ah ciidamadooda laga saaro dal kasta oo ka mid ah Midowga Afrika, halkii ay ka ahaan lahaayeen ciidamada Burundi.
Burundi ayaa ah kan labaad ee ugu weyn ee ka qeyb galaya 21,500 oo ciidamo nabad ilaalin ah oo leh 5,400 oo askari, oo ka danbeeya Uganda oo leh 6,200 balse ka hor Djibouti, Kenya iyo Itoobiya.
Midowga Afrika ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu soo celinaya ciidamada AMISOM iyada oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loo tababaray lana geeyay si ay u baddalaan.
AMISOM ayaa markii ugu horreysay la geeyay 2007-dii si ay u taageerto dowladda Soomaaliya ee taageersan dowladda federaalka ah ee caalamiga ah waxayna la dagaallamaysaa jihaadiyiinta Al-Shabaab oo lagu eedeeyay weeraro dhiig badan.
Codsiga Midowga Afrika, oo lagu sameeyey dukumiinti diblumaasiyadeed oo la yiraahdo fariin qoraal ah, ayaa timid iyada oo ay ka dhex muuqdeen xiisadihii u dhexeeyay Burundi iyo AU.
Midowga Afrika ayaa ugu baaqay Burundi in ay dibadda ku dhaleeceeyaan rikoodhka xuquuqda aadanaha - si loo yareeyo mowqifka adag ee mucaaradka ah.
Cawaaqibka ugu muhiimsan ee fallaagada rasmiga ah waa dhaqaale.
Ka qayb qaadashada AMISOM waa ilal qiimo leh oo lacag ah, waxaana la filayaa in ay saameyn weyn ku yeelato Burundi - rubuc walba, Midowga Afrika wuxuu bixiyaa $ 18 milyan (15.7 milyan oo Euro).
Taasi waxay ka dhigan tahay isha ugu weyn ee lacagaha shisheeye ee Burundi, taas oo aragtay maalgelin ka timid Midowga Yurub oo ka joojiyay arrimaha xuquuqda aadanaha.
Askarta Burundi waxay sidoo kale helayaan wax yar ka dib markii ay soo noqdaan iyagoo la shaqeynaya AMISOM, iyo sarkaal ka tirsan Midowga Afrika oo aan codsan in la magacaabo ayaa sheegay inay ahaayeen kuwo liidata oo qalabaysan, sidaas awgeedna musharax munaasab ah oo loogu talagalay wajiga kowaad ee ka guuritaanka.
War Bixinta oo Wargayska Daily Mail Qoray Si aad u Akhrido Guji Halkan